That's so good, right?: ဆတ်ဆတ်ထိမခံ ရွှေပန်းကန်များနဲ့ အလွမ်းသင့်နည်း
အဲ ရိုးရိုးဆတ်ဆတ်ထိမခံမဟုတ်တဲ့ စပါယ်ရှယ်ဆတ်ဆတ်ထိမခံတွေဟာ အမြဲတမ်းတော့ အရှက်သည်းနေ သို့မဟုတ် သီးသန့် နေတတ်လွန်းတာမျိုးမဟုတ်ကြပါဘူး။ ရှက်တတ်လွန်းသူများဟာ ဆတ်ဆတ်ထိမခံဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမယ့် သူတို့ဟာ ငြင်းပယ်ခံရမှာ အပစ်ပယ်ခံဖြစ်နေရမှာကို သေမလောက်ကြောက်တတ်ကြပါတယ်။
လူများစွာနဲ့ဆက်ဆံပေါင်းသင်းရလို့ မောပန်းတာကြောင့် သီးသန့် နေတာဖြစ်မယ်။ အချို့သော ဆတ်ဆတ်ထိမခံသူများဟာ သီးသန့်နေထိုင်တတ်သူများပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ လက်နဲ့ဆုပ်ကိုင်ရလွယ်ကူသလိုမျိုး ကိုင်တွယ်ဆက်ဆံရ လွယ်တတ်ပြန်ပါသေးတယ်။
မကြာခဏသောအချိန်တွေမှာတော့ ဆတ်ဆတ်ထိမခံတတ်သူတွေဟာ သူတို့ဘ၀နေထိုင်မှုအပေါ်ပြန်လည် သုံးသပ်ဖို့ စိတ်ကိုထိန်းညှိ ဖို့လိုနေတတ်တယ်။ နေ့တစ်နေရဲ့အချိန်နာရီအချို့ကို သူတို့အတွက် သူတို့ကိုယ်တိုင်လိုအပ်နေသလို တိတ်ဆိတ်သော လူနေမှု ၀န်းကျင်တစ်ခု သို့မဟုတ် အလုပ်ကနေ ရက်သတ္တပါတ်အချို့ ခွာနေဖြစ်ရင်တောင်မှလေ။
(၁) သူတို့နဲ့အနီးကပ်ရပ်နေတဲ့အခါ စကားတိုးတိုးပြောပါ (Speak softly when standing close to them)
(၂) အထိအခတ်မခံသူများဟာ အမြဲတစေ အထွန့်တက် တိုင်းတန်းနေတတ်သူများမဟုတ်ရပါ (Sensitives aren’t chronic complainers!)
(၃) ရွှေပန်းကန်တွေဟာ အမှန်အားဖြင့် အနုပညာကို အလွန်ချစ်တတ်ကြတယ် (Sensitives love really intense art.)
တုန့်ပြန်မှုမြန်ဆတ်ဆတ်ထိမခံတွေဟာ တစ်ခုခုစားဖို့၊ တစ်ခုခုသောက်ဖို့၊ဈေးဝယ်ထွက်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခံရတာအပြင် အခြားသော အရာတွေမှာ အဆင်ပြေသဘောကျတတ်ပေမယ့် Gym ကိုအတူသွားဖို့ကိစ္စ ဖိတ်ခေါ်ခံရတာကိုတော့ သဘောမကျတတ်ပါဘူး။ ချွေးတွေရွှဲ အသက်ခပ်ပြင်းပြင်းရှူရှိုက်နေရချိန်တွေမှာ စကားပြောဆိုရတာ သူ့အတွက်အခက်အခဲတစ်ခုပါပဲ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ လေ့ကျင့်တာဟာ ဆတ်ဆတ်ထိမခံစိတ်အခြေရှိသူများကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူများစွာရှိနိုင်ပေမဲ့ တစ်ကိုယ်တော်လေ့ကျင့် ကစားနိုင်တယ်ဆိုပါက သူတို့အတွက်ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ ဆတ်ဆတ်ထိမခံသူတစ်ယောက်ဟာ ဘောလုံးကစားတာလိုမျိုးမှာအဆင် ပြေပြေပါဝင်နိုင်ပါ့ မလား? အစုအဖွဲ့အသင်းအုပ်စုနဲ့ လှုပ်ရှားဖို့ကစားဖို့ တောင်းဆိုမှုများပါက သူတို့အတွက် အားစိုက်ထုတ်ရတဲ့ အလုပ်တစ်ခုအသွင် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ အအုပ်အသင်းနဲ့လုပ်ဆောင်ကြစို့ဆိုပါက ဘောလုံးအသင်းတစ်သင်းအနေနဲ့ ကွင်းထဲမှာကစားကြမယ့်အစား သူငယ်ချင်းတစ်စု ဘောလုံးပွဲကို အတူသွားကြည့်ကြမယ်ဆိုတဲ့ ရွေးချယ်မှုကို ဦးစားပေးကြပါလိမ့်မယ်။
လူအုပ်အသင်းအဖွဲ့နဲ့လှုပ်ရှားသွားလာနေကြရင်းမှ သူတို့တွေက မသိမသာ ခပ်ခွာခွာထွက်ခွာဖဲကြဉ်လာတာ မြင်ကွင်းကနေ ပျောက်ကွယ်တတ်တာ သို့မဟုတ် ရုတ်တရက်ဆိုသလို စကားမဆိုအသံမပြု တိတ်ဆိတ်သွားတတ်တာတွေအပေါ် သိပ်တော့မစိုးရိမ် ပါနဲ့။ နေရာမျိုးစုံနယ်ပယ်မျိုးစုံမှာ အဆိုပါ ဆတ်ဆတ်ထိမခံသူအများစုဟာ ဖြတ်သန်းတဲ့အဆင့် လုပ်ငန်းစဉ်အများကြီးလိုနေတတ်ပါ တယ်။ ပြီးရင်တော့ အချိန်ကာလတိုအတွင်းမှာပဲ အရာရာကို အာရုံစိုက်ခြင်းမှာ သက်သောင့်သက်သာနဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်သတိကပ်လာ နိုင်ပါမယ်။ သူတို့တွေဟာ ပျင်းနေဖို့ မကြိုးစားတတ်ကြသလို ပျင်းလည်းပျင်းနေကြတာမဟုတ်ပါဘူး သူတို့အနေနဲ့စိတ်အနှောင့် အယှက်ဖြစ်မနေဖို့လိုရင်းပါ။ သူတို့လိုအပ်တာလေးက ခဏတာ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းဖြစ်မှုလေးပါပဲ။ ဒါကြောင့် သူတို့ခဏတော့ တိတ်တိတ်လေးနေခွင့်ပြုလိုက်ပါလေ။
လတ်တလော အပြောင်းအလဲဖြစ်နေသော မိမိနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်ပျက်မှုအထွေထွေ၊ နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်း၊ အတိုက်အခံပါတီအပေါ်သဘော ထားအမြင်၊ လက်ရှိအစိုးရအပေါ်အမြင် စတဲ့ အရေးပါသော နိုင်ငံ့အရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်မဟုတ်တဲ့ အခြားသူနဲ့ပြောဆိုဆွေးနွေး ရတဲ့အခါ အရာရာသတိထားသင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် စိတ်ကလက်တစ်ဆစ် သိပ်အထိအခိုက်မခံသူများနဲ့ နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြောဆို ရမယ်ဆိုပါက ကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရာမယ့် ကိစ္စတစ်ခုသဖွယ် ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ် အရာရာပေါ့။ စာဖတ်သူရဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဟာ အလွန်တရာ ပါးလွှာတဲ့စက္ကူပါးတစ်ချပ် (Hyper Sensitive Person) တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါက လတ်တလော မြင်ကြားနေရတဲ့ နိုင်ငံရေးသတင်းစကားလေးတွေနဲ့ အစပျိုးဆွေးနွေးကြည့်ပါ။ နှစ်ဦးသားရဲ့ အမြင်အတွေး ဆွေးနွေးလို့ရတဲ့လမ်း ကြောင်းတူနေပြီဆိုပါမှ နိုင်ငံရေးသဘောထားအမြင်ကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲ သူ့အမြင် သူ့သဘော ထားအပေါ်မှာပဲ လက်ကိုင်စွဲထားသည်ကိုမြင်နေရပါက စာဖတ်သူအနေနဲ့ နိုင်ငံရေးသဘောထားဆွေးနွေးသင့်အဆင့်သို့မတက်လှမ်း သင့်ပါဘူး။ စာဖတ်သူကလည်း စာဖတ်သူရဲ့ နိုင်ငံရေးသဘောထားက လမ်းကြောင်းအမှန်ဖြစ်ကြောင်း လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြုထားသည် ဆိုပါလျှင် သူတို့အနေဖြင့် ဒါသက်သက်ချိုးနှိမ်ချင်လို့ ဆန့်ကျင်ဘက်အမြင်ကို ပြောနေတာလို့တွေးထင်ကာ စာဖတ်သူနဲ့ဆက်ဆံရေး ကို သွေဖယ်ရှောင်ရှားပါလိမ့်မယ် များမကြာခင်မှာပေါ့။
တကယ်လို့ စာဖတ်သူဟာ သူတို့နဲ့အတူနေထိုင်သူဆိုပါက ကိုယ်စားသောက်ချက်ပြုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ပစ္စည်းပစ္စယတွေယူငင်သုံးစွဲပြီး ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ရှုပ်ရှက်ခပ်နေအောင်မထားပစ်ခဲ့ဘဲ ကိုယ့်အမှိုက်ကိုယ်ရှင်း ကိုယ်ဖွတာကိုစနစ်တကျပြန်ရှင်း စည်းစနစ်တကျနေထိုင် လုပ်ကိုင်သင့်ပါတယ်။ ရှုပ်ပွနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားဟာ သူ့ဖာသာသူ အထိတ်အခတ်မခံတတ်သူဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်နဲ့မဆိုင်ပါဘူး လူတိုင်းလိုလို သဘောမကျတတ်တဲ့အရာပါ။ HSP တွေအနေနဲ့ လူတွေအမြင်မှာ အပြစ်ကင်းအောင်ဘယ်လိုနေသလဲ သူတို့ကိုယ်ရည် ကိုယ်သွေးတွေကို အတုယူသင့်ယူရပါမယ် ခင်ဗျ။